Ukuhlolwa okusha kwe-Covid-19 kuhlaziya ukumemeza kwakho | Scrolla Izindaba
Ukuhlolwa okusha kwe-Covid-19 kuhlaziya ukumemeza kwakho
Umsunguli waseDashi uqhamuke nendlela entsha yokuhlola ukuthi ngabe umuntu unegciwane le-corona yini: umuntu umane amemeze edokodweni elingenawo umoya.
Indlela kaPeter van Wees, ehlaziya umoya womuntu ukuthola izimpawu ze-coronavirus, iyindlela yakamuva ehlukile kunama-swabs. Lokhu akuphathani kahle futhi kubuhlungu, futhi kufanele kulandwe emuva kwema-nasal passages akho.
UVan Wees wamisa idokodo lakhe eduze kwesikhungo sokuhlola i-Covid-19 e-Amsterdam ukuzama ukuqala ukuhlola kwakhe abantu abasanda kuhlolwa.
Ucwaningo lifaka umuntu omi edokodweni elingangeni umoya futhi ememeza phezulu akhiphe wonke umoya osemaphashini akhe.
Ukumemeza kukhipha izinhlayiya zamathe, eziqoqwa ngomshini wokuhlanza umoya wezimboni bese zihlolelwa leli gciwane.
“Uma une-coronavirus futhi uthelelekile futhi umemeza, usabalalisa izinhlayiya ezingamashumi ezinkulungwane ezine-coronavirus,” kusho uVan Wees etshela i-Reuters.
Yonke inqubo ithatha cishe imizuzu emithathu. UVan Wees ucabanga ukuthi kuzoba ithuluzi lokuhlola elingaba wusizo kumakhonsathi, ezikhumulweni zezindiza, ezikoleni noma emahhovisi.
Abantu abahlolayo kade bekulangazelele ukuthola enye indlela ngale kokwenza ama-swabs, okuyinqubo ehamba kancane futhi abaningi, ikakhulukazi izingane, abangayithandi kahle.
I-National Institute for Health (i-RIVM) yase-Netherlands, ngokwesibonelo, izokwamukela ucwaningo olusheshayo, olusebenzayo kakhulu, ngokusho kokhulumela i-RIVM uGeert Westerhuis.
Umthombo wesithombe: @nbcchicago